Shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay Gobolka Mudug oo Maanta furmaya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay Gobolka Mudug oo Maanta furmaya
Saacadaha soo socda ee Maanta oo Jimco ah ayaa waxaa lagu wadaa in deegaanka Bandiiradleey ee Gobolka Mudug uu ka furmo Shir dib u-heshisiineed Islamarkaana u dhaxeeya Beelo ka soo kala jeedda Galmudug iyo Puntland kuwaas oo dhawaan ku dagaalamay degaanka Taaroge ee Galbeedka Gobolka Mudug.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb-galaya Odayaasha labada beeleed ee dagaalamay iyo mas’uuliyiin ka kala socda Maamulada Puntland iyo Galmudug oo ay kasoo kala jeedaan labada maleeshiyo beeleed ee dagaalamay.
Shirka ayaa waxaa diirada lagu saarayaa sidii xal buuxa looga gaari lahaa dagaalada soo noq noqday ee ka dhacay degaanka Taaroge ee Galbeedka Gobolka Mudug, in kastoo xilligaan xaalada degaanka ay tahay mid degan.
Dagaal beeleedkii ka dhacay degaanka Taaroge ee Galbeedka Gobolka Mudug ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah iyo barakaca dad badan oo ka cabsi qabay in uu waxyeelo kasoo gaaro dagaalka.
Previous articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 05-06-2020